Jalisco ပုံမှန်ဝတ်စုံ, မက္ကဆီကန်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုရို | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 12/05/2021 09:19 | ယဉျကြေးမှု, မက္ကစီကို
Jalisco ၏ပုံမှန်ဝတ်စားဆင်ယင်၏ပုံမှန်အဝတ်အစားနှင့်ဆင်တူအများအပြားရှိပါတယ် အဆိုပါ mariachisသူတို့မကြာခဏရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းအထိ။ တကယ်တော့ဒါဟာအဆုံးစွန်သော Jalisco မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် ကိုကာကိုလာ။ သို့သော်သူတို့အတိအကျအတူတူမရှိကြပေ။ ၎င်းတို့ထဲမှဒုတိယတစ်ခုသည်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိခြင်းအပြင်ဘောင်းဘီနှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်တွင်ခလုတ်များပါဝင်သည်။
သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင်သိမ်းပိုက်မည့်စစ်မှန်သော Jalisco ဝတ်စုံသည် ပို၍ သမ္မာသတိရှိကြသည်။ နိုင်ငံ၏အနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးနှင့်သူတို့၏အဝတ်အစားများနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောဒီမက္ကဆီကန်ပြည်နယ်၏ဂန္ထ ၀ တ်အ ၀ တ်အစားများကိုသင့်အားပြောပြပါမည်။ Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colimaအဖြစ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူ။
1 Jalisco ၏ပုံမှန်ဝတ်စားဆင်ယင်၏ထူးခြားချက်များ
1.2 အမျိုးသမီးများအတွက် Jalisco ပုံမှန်ဝတ်စုံ
1.3 Jalisco အမျိုးသားများအတွက်ဝတ်စုံ
2 ဘယ်အချိန်မှာ Jalisco ၏ပုံမှန်စားဆင်ယင်အသုံးပြုသည်
2.1 Charro နေ့
ဒီအ ၀ တ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမိုင်းကိုအနည်းငယ်လေ့လာပြီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့ရဲ့ ၀ တ်စုံတွေကိုအာရုံစူးစိုက်ပါမယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည် ပိုပြီးရောင်စုံနှင့်ရွှင်လန်း အမျိုးသမီး၏။
၏မူလအစ charro ဝတ်စုံ၎င်းသည်သင်သိပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ ၁၆ ရာစုမှ Jalisco မှရိုးရာဓလေ့ထုံးစံဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းသည်မှာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အ ၀ တ်အထည်သည်စပိန်နိုင်ငံများအထူးသဖြင့်စပိန်နိုင်ငံများ၌မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရသည် Salamanca.
ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ဒီပြည်နယ်ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုအတိအကျခေါ်တယ်။ charros။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အဝတ်အစားကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့က Jalisco ဝတ်စုံနဲ့ဆင်တူတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲ။ စပိန်မှာအားကောင်းတဲ့အနက်ရောင်ဘောင်းဘီ၊ အရောင်တူအကျီတိုတိုနဲ့စီးနင်း ၀ တ်စုံတွေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦး ထုပ်အများကြီးသေးငယ်အတောင်ပံနှင့်အတူပေမယ့်ဆင်တူသည်။
Jalisco ၏ပုံမှန်စားဆင်ယင်နှင့်အတူ Charros
ဒီအဝတ်အစားတွေကိုဟစ်စပန်းနစ်များရောက်ရှိလာခြင်းနဲ့အမေရိကားကိုသွားပြီးမွေးစားလိမ့်မယ် Jalisco areaရိယာ။ သို့သော်၎င်းသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ နောက်ရာစုနှစ်များအတွင်းထပ်မံပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည် မြောက်မြားစွာလက်လုပ်ပန်းထိုးနှင့်အဆင်တန်ဆာ။ XIX တွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည် ခီနာ, လယ်ပြင်၌အလုပ်လုပ်သောလူတို့အားပေးသောအမည်။
သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်thatကရာဇ်ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည် Habsburg ၏ Maximilian သူသည် charro ဝတ်စုံကိုအထင်ကြီးလေးစားသူဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏နိုင်ငံသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရာတွင်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေးနှင့်အတူပြီးသား, ဒီအဝတ်အစားလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်ဖြစ်လာခဲ့သည် quintessential မက္ကဆီကန်ဝတ်စုံနိုင်ငံ၏အခြားဒေသများထက်သာလွန်သည် (အကယ်၍ သင်ကနောက်ဆုံးအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည် ဤဆောင်ပါး).
သို့သော်လက်ရှိတွင်ပုံမှန် charro အဝတ်အစားအားလုံးသည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကွာခြားတယ် အ ၀ တ်အထည်များ၊ သူတို့ကိုအကြားမည်သည့်ခြားနားချက်ခဲရှိပါတယ်ပေမယ့်။ တစ် ဦး တည်းသာနေထိုင်သည် ပန်းနှင့်အဆင်တန်ဆာ၏ဇိမ်ခံကား သူတို့ထည့်သွင်းပြီ။ သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်အလွန်လှပပြီးအံ့ iking ဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းယခင်သည်ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ သမ္မာသတိရှိကြသည်။
Jalisco ပြည်နယ်ရှိမြို့တော်နှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သော Guadalajara သို့သင်လည်ပတ်လျှင်သင်၏ပုံမှန်ဝတ်စုံကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ ဆင်ခြင်တုံတရားအရ၎င်း၏နေထိုင်သူများသည်နေ့စဉ်၎င်းကိုမသုံးသော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုသည် သူတို့ကဒီဝတ်စားဆင်ယင်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်၏အားသာချက်ယူပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ် ado မရှိရင်မင်းတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက် Jalisco ဝတ်စုံအကြောင်းမင်းတို့ကိုပြောမယ်။
အမျိုးသမီးများအတွက် Jalisco ပုံမှန်ဝတ်စုံ
Jalisco အမျိုးသမီးများသည်အင်္ကျီရှည်နှင့်တစ်ပိုင်းတစ်စဝတ်စုံ ၀ တ်ထားသည်။ လုပ်ထားတယ် ရေတံခွန်လည်ပင်းမှာမြင့်မားပြီးလက်များမှာအိတ်များဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာ, ရင်ဘတ်အမြင့်မှာကသယ်ဆောင် အချို့ vee-shaped ဘောလုံး အဲဒီထပ်။ ဒါ့အပြင်စကတ်အတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်။
အရောင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည် တစ်ခုတည်းသေံဒီရွှင်လန်းနှင့်ဆနျ့ကငျြပေမယ့် တိပ်ခွေတွေ ကထပ်နှင့်ကအဆင်တန်ဆာအဖြစ်ဝတ်ဆင်သောဇာနှင့်အတူရှိကြောင်း။ ဖိနပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ၎င်းသည်ဇာနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဆံပင်၏ ဦး ခေါင်းကို ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ဖဲကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အမျိုးသားများအတွက် charro ဝတ်စုံနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်အပေါ်ပိုင်းတွင်ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် တိုတောင်းသောဂျာကင်အင်္ကျီ။ ၎င်းသည်ရင်ခေါင်း၏အောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိပြီး၎င်း၏လက်များသည်ပြသရန်တိုတောင်းပါသည် ငွေအဆင်တန်ဆာ အရုပ်၏။ အလားတူပြုလုပ်နှင့်အတူတန်ဆာဆင်နိုင်ပါတယ် ခလုတ်ခုနစ်ဆယ် သူတို့ရွှေလည်းဖြစ်နိုင်သည်တူညီသောသေံ၏။
ဘောင်းဘီဆိုရင်တော့သူတို့ကတင်းကျပ်စွာ၊ အဝတ်အထည်များ၊ အဝတ်အထည်များနှင့်မှောင်မိုက်သောတီးလုံးများဖြစ်သည်။ သူတို့ကလည်းသယ် အားလုံးခြေထောက်တစ်လျှောက်ကိုချုံ့။ အဆိုပါအဝတ်အစားကိုဝတ်စုံကိုကဲ့သို့တူညီသောအရောင်ဇာ -up, ဘွတ်ဖိနပ်များဖြင့်ဖြည့်ထားသည်။
အထူးဖော်ပြချက်လုပ်ရမည် sombrero။ မူလက Jalisco နေ၏သက်ရောက်မှုများကိုတွန်းလှန်ရန်နှင့်မြင်းတစ်ကောင်၏ကျဆုံးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်ဆံပင်၊ သိုးမွှေး၊ ဂျုံကောက်ရိုးဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၄ င်းတို့၏ဖန်ခွက်များတွင်ကျောက်တုံးများသို့မဟုတ်ဖဲကြိုးလေးခုပါရှိသည်။
ဒီ ဦး ထုပ်ရဲ့အစွန်အဖျားဟာကြီးမားပြီးကျယ်ပြန့်တယ် လို့ခေါ်တယ် ၎င်း၏နောက်ကျောအပေါ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်တန်ဆာဆင်ထားသည် shawl သို့မဟုတ်ပန်းချုံ့။ ဤဒီဇိုင်းသည်လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သဖြင့်မက္ကဆီကိုတစ်ခွင်တွင်ပုံမှန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် charro စတိုင်တွင်မပျောက်ဆုံးနိုင်သောအခြားအပိုင်းတစ်ခုမှာ၎င်းဖြစ်သည် သရက်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်အဝတ်အစားမဟုတ်ပါ၊ မြင်းစီးသူရဲများမြင်း၏ကုန်းနှီးနှင့်အတူသယ်ဆောင်ထားသောစောင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ခြေလျင်အကများနှင့်ပွဲများကိုသင်တက်ရောက်သည့်အခါသင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းမြင်းစီးဖြတ်သန်းသည့်အခါသို့မဟုတ် charros ပြပွဲ နောက်တစ်ခုကမင်းကိုပြမယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ Jalisco ၏ပုံမှန်စားဆင်ယင်အသုံးပြုသည်
အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အတွက် Jalisco ဝတ်စုံများကိုမည်သို့ရှင်းပြပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ စကားပြောရန်အာရုံစိုက်မည် ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပွဲတော်များ သူတို့၌ဝတ်စားဆင်ယင်ထားသောလူများကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဤအမတ်မတ်ဝတ်ဆင်ကြသည်ရှိရာပြပွဲတန်းတူထူးချွန်၏ဖြစ်ကြသည် အဆိုပါcharrería။ Aztec နိုင်ငံ၏ရိုးရာမြင်းစီးခြင်းပွဲများကိုဒီနာမည်ပေးသည်။ သူတို့ကခေါ်ကြသည်နယ်ပယ်များတွင်ဖွံ့ဖြိုး charro ပန်းချီကား မြင်းစီးသူရဲများသည်မြင်း၏နောက်ကျောတွင်မတူညီသောလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ကြသည်။
အားကစားတစ်ခုအနေဖြင့် ၂၀ ရာစုအစတွင်မွေးဖွားလာသည့်လယ်ယာမြေများရှိမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုအမှတ်ရရန်မွေးဖွားခဲ့သည်။ charreríaကိုမက္ကဆီကိုတွင်အဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုမှဖွဲ့စည်းသည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ Intangible အမွေအနှစ် သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ယူနက်စကိုက။
လက်ရှိတွင်အမျိုးသမီးများသည်charreríaတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နေသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတစ် ဦး ကိုရွေးကောက်သောကြောင့်မသာ Reina ၎င်းသည်မတူညီသောပွဲတော်များကိုဖွင့်လှစ်ရန်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော်လည်းဖြစ်သည် မြင်းစီးပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကျော်ကြားသောဆုံးမပဲ့ပြင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောအမေဇုန်များဖြစ်သည် ချာရာ။ ၎င်းတွင်မြင်းနောက်ကျောနှင့်တေးဂီတ၏စည်းချက်ကိုသံစုံတီးဝိုင်းများပြုလုပ်သောအမေဇုံရှစ်အုပ်စုပါဝင်သည်။
သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာ, charras ပို။ ပို။ အခြားပြပွဲလေ့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြလိမ့်မည် မြင်း cove၊ နွားနှင့်မြင်းစီးသူရဲများ၊ ပတ္တူစပေါ်၌ piales များ၊ ခြေလျင်သို့မဟုတ်မြင်းစီးသည့် manganas များ၊ လက်စွပ်ထဲမှရွေးချယ်ရန်စာရင်းသို့မဟုတ်သေခြင်းခြေလှမ်း.
ယုတ္တိနည်းအရဤကိစ္စများတွင်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ဝတ်စုံအတွက်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ သူတို့တွင်စပါး၊ ဦး ထုပ်နှင့် ၀ န်ထမ်းများပါသည့်ဘွတ်ဖိနပ်များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့ကမြင်းပေါ်တွင်ဟုခေါ်သည့်အထူးတောင်ပေါ်မှာထား၏ ထန်းတပင်.
အဆိုပါcharreríaမက္ကဆီကန်အစဉ်အလာမှအလွန်စည်းလုံးသောကြောင့်စက်တင်ဘာလ 14 တိုင်း Aztec တိုင်းပြည်ကျင်းပခဲ့သည် Charro နေ့။ ၎င်း၏နယ်မြေတစ်လျှောက် (အကယ်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသင်ဖတ်လိုလျှင်) Veracruz, ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ) ကမြင်းစီးခြင်းနှင့်ဂီတပြပွဲကြောင့်အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပကြသည်။ အဆုံးစွန်သောနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် mariachis သူတို့ကပကတိဇာတ်ကောင်တွေပါ။
ငါတို့ပြောနေသော Jalisco ပြည်နယ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ Guadalajara သည်ထိုနေ့၌ကျင်းပသည် Mariachi နှင့်Charrería၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေး။ သင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းမြို့တော်၏လမ်းများကိုအလှဆင်ထားပြီးထောင်နှင့်ချီသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့ဖြတ်သန်းသွားလာနေသော Jalisco ဝတ်စုံများနှင့်ရိုးရာဂီတများကိုအနက်ဖွင့်ကြသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်များအဓိကအား၌အာရုံစိုက်နေကြသည် လွတ်မြောက်ရေးရင်ပြင်မြောက်မြားစွာသောပွဲတော်များရှိရာ။ သို့သော်ချီတက်ပွဲ, Gala အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲလည်းရှိပါတယ် လည်ချောင်းဖြတ်ပြဇာတ်ရုံ ပင်ထုအတွက်သီဆို Zapopán၏ Basilica.
ရိုးရာအဖွဲ့များသည်ထိုကဲ့သို့သောဂီတအမျိုးအစားများကိုလုပ်ဆောင်သည် Tapatio ရည်၎င်းကို "မက္ကဆီကန် ဦး ထုပ်" ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဒါဟာမက္ကဆီကိုတော်လှန်ရေးမှာငါတို့ရှာရမယ့်ရည်းစားကခုန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားအမျိုးအစားမှာလည်းလူကြိုက်များတဲ့ပွဲများလည်းရှိပါတယ် Culebra, လယ်ပြင်၌အလုပ်ထပ်လောင်းတဲ့ကခုန်သည် Iguana နှင့် ဘူတိုနားထောင်နေစဉ်စကားပြန်များသည်အခြားအကများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် mariachis အသံ။ ဤသည်charrería၏အကများနှင့်ပြပွဲများနှင့်အတူလိုက်ပါ, ဒါကြောင့်, Jalisco ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သောသီချင်းများ၏နာမကိုအမှီ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါသည် ပုံမှန် Jalisco ဝတ်စုံ ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်။ မက္ကဆီကိုရှိcharreríaကမ္ဘာ၏အရေးပါမှုနှင့်ဤအဝတ်အစားနှင့် mariachi အသံများပါ ၀ င်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် Aztec နိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်များရန်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » ပုံမှန် Jalisco ဝတ်စုံ